सेल्फी रोडमा यसरी हुँदोरहेछ यौ’नक्रिया ! एक जोडी रंगेहात प’क्राउ – List Khabar
Home / समाचार / सेल्फी रोडमा यसरी हुँदोरहेछ यौ’नक्रिया ! एक जोडी रंगेहात प’क्राउ
सेल्फी रोडमा यसरी हुँदोरहेछ यौ’नक्रिया ! एक जोडी रंगेहात प’क्राउ
admin December 29, 2021 समाचार Leaveacomment 279 Views
पथरी शनिश्चरे नगरपालिका—२ मा रहेको सेल्फी रोडबाट यौ’न क्रियाकलापमा लिप्त भइरहेको एक जोडीलाई प’क्राउ गरेको छ। करिब साढे ४ बजेको समयमा रोड किनारमा यौ’न क्रियाकलापमा संलग्न भइरहेको एक अधबैसे जोडीलाई स्थानीयले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए।
खबर पाउना साथ इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीको टोलीले अटो सहित सेल्फी रोड बाट उनिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। प’क्राउ पर्नेहरुमा उर्लाबारी स्थायी ठेगाना भएका आटो चालक वर्ष ४० का पुरुष रहेका छन् भने पथरीशनिश्चरे नगरपालिका स्थायी ठेगाना भएकी वर्ष ३२ की महिला रहेकी छिन्।
उर्लाबारी स्थित मगलबारे बाट अटोमा चढेर पथरीशनिश्चरे घर हिडेकी ति महिला र अटो चालक सो स्थानमा पुगेपछि यौ’नक्रि’याकलापमा समलग्न भएको प्रहरीले जनाएको छ।
मा’दक प’दार्थ से’वन गरेका दुवैले महिलालाई घर पुर्‍याउने क्रममा सो क्षेत्रमा अ’वान्छित गतिविधीमा समलग्न पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनिहरुलाई सार्वजनिक स्थलमा अ’श्लिल क्रि याकलापमा समलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले अ भद्र व्या बहारमा मु द्दा दर्ता का र्वाही अगाडी बढाएको जनाएको छ।साभार : ब्रेकलिन्क्स
Previous अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२२ मा बिवाह गर्ने योजना छ ? यि ५ राशिका लागि छ अति उत्तम
Next बैंक खाताबाटै यसरि पारिन्छ लाखौं रकम गायव